आज मिति २०७७, पुस १ गते बुधबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित) – Nepali news portal
आज मिति २०७७, पुस १ गते बुधबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
१ पुस २०७७, बुधबार ०८:५८ December 16, 2020 काठमाडौं डेष्क
मेष : तपाईंको हँसिलो स्वभावले कसैलाई यस कौशलको विकास गर्न आफूलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत गर्नेछ किनकि तपाईंले उसलाई यो कुरा बुझ्ने बनाउनुभयो कि खुशियाली भेला पारेको सम्पत्तिमा नभएर हामी भित्र हुन्छ। आशिष् र राम्रो भाग्य तपाईंको बाटोमा आउनाले इच्छा पूरा हुनेछ – र यो अघिल्लो दिनको कठिन कामको परिणामले गर्दा हो। तपाईंले आफ्नो समस्या बिर्सिनुहुनेछ र परिवारका सदस्यहरुसँग राम्रो समय बिताउनु हुनेछ। आज अचानक रोमान्टिक कुराहरू निस्कने सम्भावना छ। तपाईंको कडा परिश्रमले आज काममा रंग देखाउनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथी के अर्थमा लिनुभएको छ भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
वृष : तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। आफ्नो जोडीसँग बस्दा सान्त्वना, प्रेम र राहत पाउनुहोस्। तपाईंको लगातार मेहनतलाई आज साँच्चै नै राम्रो लाभ भएको छ। यात्राले तपाईंलाई नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू भेट्न सघाउँछ। समयका अभावको कारण तपाईं र तपाईंको प्रेमी बीच निराशा बढ्न सक्छ।
मिथुन : आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किनुहोस् र तपाईंलाई साँच्चै आनन्द आउने काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। साँझको लागि रोमाञ्चक योजना राखेर तपाईंका मित्रहरूले तपाईँको दिन रोशन गर्नेछन्। तपाईं साँझ साथीहरूसँग बाहिर जानुभयो भने तत्काल रोमान्स आउन सक्छ। वरिष्ठ सहकर्मी र आफन्तहरूले राम्रो सहयोग गर्नेछन्। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
कर्कट : तपाईंको बाल्य प्रकृति निस्किने छ र तपाईंमा चञ्चल मुड आउनेछ। तपाईंले आशा गरेझै काम गर्न असफल हुनाले बच्चाहरुले निराश गराउन सक्छन्। तपाईंले आफ्नो सपना पूरा भएको देख्नको लागि तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। रोमान्स सुखद र अत्यधिक रोमाञ्चक हुनेछ। आफ्नो पक्षमा भाग्य भएकोले आज तपाईंलाई लाभ हुनेछ किनकि तपाईं ठीक ठाउँमा र सही समयमा हुनु हुनेछ। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
सिंह : आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किनुहोस् र तपाईंलाई साँच्चै आनन्द आउने काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। घरेलू विषय र बाँकी रहेका घरेलू काम सक्ने अनुकूल दिन। एउटा आश्चर्यको सन्देशले तपाईंलाई राम्रो सपना दिनेछ। व्यापार साझेदारले सहायतापूर्ण व्यवहार गर्नेछन् र तपाईंले सँगै रहल काम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
कन्या : आफ्ना आशाहरू पूरा गर्न व्यक्तिगत सम्बन्धको दुरूपयोग गर्नाले तपाईंकी पत्नीलाई चिन्तित बनाउन सक्छ। तपाईं कामले साह्रै तनाउ दिएकोले परिवारका आवश्यकताहरू र खाँचाहरूलाई बिर्सिनु हुनेछ। तपाईं पहिलो नजरमा प्रेममा पर्न सक्नुहुन्छ। काममा तपाईंका प्रतिद्वन्द्वीले आज आफ्ना नराम्रा कृत्यको परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। आज तपाईंले आफ्नो मनको जाँच गर्नु हुनेछ – तपाईंहरू कसैले चेस-क्रोसवर्ड खेल्न लाग्नुहुनेछ भने कसैले कथा-कविता लेख्नु हुनेछ वा भविष्यको बारेमा केही योजना बनाउनुहुनेछ। विवाह यौनको लागि मात्रै हो भनेर भन्नेहरूले ढाँट्छन्। किनभने, आज तपाईंलाई साँचो प्रेम के हो भन्ने थाहा हुनेछ।
तुला : तपाईंको बाल्य प्रकृति निस्किने छ र तपाईंमा चञ्चल मुड आउनेछ। अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्। तपाईंले आजको खाली समयको लाभ लिनुहोस् र परिवारका सदस्यहरुसँग प्यारो समय खर्च गर्नुहोस्। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको परमानन्द प्रेम भएका दुई बीच रहन्छ। हो, तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तपाईंले प्रदान गर्न सक्नुहुने निश्चित नभएसम्म केहि प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। तपाईंले कसैलाई दिएको सहायताको इनाम वा स्वीकार प्राप्त हुनेछ यसैले आज तपाईं सबैको प्रसंशाको पात्र हुनुहुनेछ। तपाईंको विवाहले यस दिन सुन्दर मोड लिनेछ।
वृश्चिक : तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूले सहायता गर्नाले तपाईं खुसी हुनुहुनेछ। आशिष् र राम्रो भाग्य तपाईंको बाटोमा आउनाले इच्छा पूरा हुनेछ – र यो अघिल्लो दिनको कठिन कामको परिणामले गर्दा हो। तपाईंका परिवारका सदस्यहरूले सानो कुरालाई ठूलो बनाउने प्रयास गर्ने सम्भावना छ। आफ्नो रोमान्टिक दृश्य प्रसारित हुन नदिनुहोस्। तपाईंले राम्रो आदर दिन सक्नुहुँदैन भने कुनै पनि प्रतिबद्धता नगर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। तपाईंको कार्य व्यस्तताको कारणले तपाईंको जोडीले तपाईंको इमानदारी प्रति शङ्का गर्न सक्छ, तर दिनको अन्त्यमा उनले कुरा बुझेर तपाईंले अंगाल्ने छन्।
धनु : आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। तपाईंको आकर्षण र व्यक्तित्वले केही नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। आफ्नो बोलीको नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि तपाईंका कठोर शब्दले अशान्ति फैलाउँछ र आफ्नी प्रियतमासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। योग्य कर्मचारीहरुका लागि पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ। तपाईंलाई मद्दत गर्ने मानिसहरूको लागि तपाईंले प्रतिबद्धता बनाउनु हुनेछ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंको प्रतिष्ठामा केही धेरै असर गर्न सक्छन्।
मकर : संतोषजनक जीवनको लागि आफ्नो मानसिक क्रूरतामा सुधार ल्याउनुहोस्। तपाईं आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई भनेको सबैमा सहमत हुनुहुँदैन – तर तपाईंले उनीहरूको अनुभवबाट सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। कसैको नयाँ रोमान्सले तपाईंको आत्माको उत्थापन गर्दछ र तपाईंलाई खुसीको मुडमा राख्छ। आज एउटा राम्रो कार्यको परिणामले कामका शत्रुहरू तपाईंका साथी हुन सक्छन्। तपाईंलाई आफ्नो जोडीले विशेष ध्यान दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
कुम्भ : तपाईंको बाल्य प्रकृति निस्किने छ र तपाईंमा चञ्चल मुड आउनेछ। आफ्ना घरको श्रृंगारको लागि आफ्नो खाली समय प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंका परिवारले साँच्चै नै यसको कदर गर्नेछ। तपाईंले नगर्ने कुरा अरूलाई जबरजस्ती गराउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको प्रतिस्पर्धी प्रकृतिले तपाईं प्रवेश गरेको कुनै पनि प्रतियोगिता जित्न सक्षम गराउनेछ। आफ्नो जीवनसाथीले आज तपाईंलाई अतिरिक्त विशेष समय दिनेछन्।
मीन : धेरै क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो व्यायाम तिर ध्यान दिनुहोस्। घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईंको तनाउ कम गर्नेछ। तपाईं पनि भागेदार हुनुहोस र मूक दर्शक जस्तो भएर नबस्नुहोस्। तपाईं साँझ साथीहरूसँग बाहिर जानुभयो भने तत्काल रोमान्स आउन सक्छ। तपाईंको आज सबै काममा राम्रो हात पर्न सक्छ। यात्रा र शैक्षिक गतिविधिहरूले तपाईंको जागरूकतामा बृद्धि गर्नेछ। तपाईंको जोडी आफ्नो जीवनमा तपाईंको मूल्य वर्णन गर्दै केही सुन्दर शब्दहरू लिएर आउनेछन्।
९३६ जनामा कोरोना सङ्क्रमित थपिए, १४ को मृत्यु